यी ३ राशि भएका केटाहरुसँग धेरै आकर्षित हुन्छन् युवतीहरु – Medianp
यी ३ राशि भएका केटाहरुसँग धेरै आकर्षित हुन्छन् युवतीहरु
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष २६, २०७५१५:०२0
काठमाडौ । ज्योतिशी शास्त्र अनुसार १२ वटा राशीहरुमध्ये केही राशीहरु सगँ मात्रै युवतीको आकर्षण हुने बताउछन् । किनभने हरेक राशीहरुको आ आफ्नै छुट्टै किसिमको प्रभाव हुन्छ । कोही मानिसहरु प्रेम भनेपछि घृणा गर्ने हुन्छन् । भने कोही छिट्टै प्रेममा आकर्षित हुन्छन् ।त्यसैगरी कोही युवाहरु राम्री युवती देख्ने बित्तिकै आफ्नो प्रेममा पार्न खोज्छन् । तर यी ३ राशी भएका पुरुषहरुप्रति महिला धेरै आकर्षित हुन्छन् । हेरौ कुन कुन हुन् ?
पहिलो सिंह राशी ,,यो राशी हुने पुरुषहरु धेरै रमाइला , सधै खुसी हुने र आफ्नो प्रेमीलाई धेरै माया गर्ने भएकाले युवतीहरु चाडै आकर्षित हुन्छन् । किनभने युवतीहरुले आफ्नो जीवनसाथीको लागी जेहेनदार , मिहेनती र विश्वासिलो केटाको खोजीमा हुन्छन् ।
दोस्रोमा मकर राशी , यो राशी हुने पुरुषहरु पनि सिंह राशी जस्तै नै हुन्छन् । तर मकर राशी हुने पुरुषहरुको व्यक्तित्व पनि आकर्षक हुने र विश्वासिलो भएकाले धेरै युवतीहरुले मन पराउछन् ।
र कन्या राशी ,, यो राशी हुने पुरुषहरु धेरै भावुक, आफ्नो प्रेमीलाई आफु दुखमा परेको बेला पनि खुसी दिन सक्छन् । भने दुख , सुख सबै बुझेको विश्वासिलो हुने भएको यी २ राशीहरु भन्दा पनि कन्या राशी भएको केटाहरुसँग बढी आकर्षित हुन्छन् ।
१५ करोड रुपैयाँमा बिक्यो यो परेवा ! आखिर के छ यो परेवामा त्यस्तो ?
लामो यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ ? भुलेर पनि यी ५ गल्तीहरु नगर्नुस्,अशुभ हुन्छ
अबको ३ वर्षसम्म यी ४ राशिहरुलाई हुनेछ धन लाभ ! जान्नुस् , कुन कुन राशी हो ?
यी हुन् पृथ्वीमै सबैभन्दा बढी उमेर बाँचेका ब्यक्ति , जसको २४ विवाह र २०० सन्तान, उमेर कति वर्ष ?
आज सोमबार शिवको यी मन्त्रहरु जपेर पुजा गर्नुस् मिल्नेछ दुर्घटनाको योग र मृत्यु भयबाट छुट्कारा (विधीसहित)
नेपालमा पाइने यो अचम्मको फूल किन नयाँ वर्षको दिन मात्र फूल्छ ? यस्तो छ रहस्य